विश्वमा कोरोना महामारीः कहाँ कतिको मृत्यु र संक्रमित ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वमा कोरोना महामारीः कहाँ कतिको मृत्यु र संक्रमित ? (सूचीसहित)
२०७७, ९ बैशाख मंगलवार
काठमाडौंः कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ७० हजार नाघेको छ ।
गएको २४ घन्टामा कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर ५ हजार ३ सय ६६ जनाको मृत्यु भएसँगै मृत संख्या १ लाख ७० हजार ४ सय २३ पुगेको वल्र्डओमिटरले जनाएको छ ।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २४ लाख ८१ हजार २६ पुगेको छ । सोमबार मात्रै विश्वभर करिब ७ हजार संक्रमित फेला परेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पाटन अस्पतालमा थप १ कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म ६ लाख ४६ हजार ३ सय ६७ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने ५६ हजार ७ सय ६५ को अवस्था गम्भीर छ ।
गएको २४ घन्टामा कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी अमेरिकामा १९ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या ४२ हजार ५ सय १४ पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कोरोनाबाट विराटनगरमा थप दुई जनाको मृत्यु
अमेरिकापछि अहिलेसम्म इटालीमा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ सोमबार ४ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै इटालीमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २४ हजार नाघेको छ ।
त्यसैगरी स्पेनमा अहिलेसम्म २० हजार ८ सय ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ सोमबार ३ सय ९९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यसैगरी फ्रान्समा अहिलेसम्म २० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । फ्रान्समा सोमबार ५ सय ४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
युकेमा साढे १६ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ सोमबार ४ सय ४९ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् ।